Top 5 Tông Đơ Cắt Tóc tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Tông Đơ Cắt Tóc tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Tông Đơ Cắt Tóc tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
3.7/5 – (12 amavoti)
Ingabe ufuna ukuthenga isiqeshana sezinwele kodwa awazi ukuthi iyiphi ongayikhetha? Sicela ubheke esihlokweni esilandelayo ukuze ukwazi ukukhetha ukuthenga iziqeshana zezinwele ezinhle kakhulu!
Njengamanje, kumasaluni ezinwele noma ezitolo zokugunda amadoda, isilungisi sezinto cishe esibaluleke kakhulu. Akukhona lokho kuphela, emindenini enezingane ezincane, futhi, ukusetshenziswa kwe-trimmer kuthandwa kakhulu futhi kuthandwa ngokunethezeka nokuhlangana kwayo. Ngokuya ngezidingo nezinjongo zokusetshenziswa, kuzoba nezinhlobo ezahlukene zokulungisa. Uma futhi ufuna ukufunda ngalo mkhiqizo futhi ufuna ukuwuthenga, Iziqeshana zezinwele ezinhle kakhulu Sicela ubhekisele esihlokweni esilandelayo kanye nathi.
Iluphi uhlobo lwesiqeshana sezinwele olulungile?
1 Ukwethulwa kafushane kweziqeshana zezinwele
1.1 Umgomo wokusebenza we-trimmer
1.2 Sinjani isakhiwo se-trimmer?
2 Izinhlobo zeziqeshana zezinwele ezidumile emakethe
2.1 Isilungisi sebhethri esishajwa kabusha (isilungisi esingenantambo)
2.2 Isilungisi sikagesi (i-trimmer enentambo)
3 Imikhiqizo engu-5 ehamba phambili ethandwa kakhulu yokugunda izinwele namuhla
3.1 Ikhodi yokulungisa iCodol 531
3.2 I-Philips HC5410
3.3 I-Codos T6
3.4 I-Jichen Trimmer JC-0817
3.5 I-Kemei KM730
4 Imiyalo yokuthi ungathenga kanjani iziqeshana zezinwele ezingcono kakhulu nezifaneleka kakhulu
4.1 Khetha ukuthenga ngokuya ngomthamo wesilungisi
4.2 Hlola i-trimmer blade
4.3 Khetha ngokuklama
4.4 Ukukhetha ngokuya ngenani lesilungisi
5 Eminye imibuzo evame ukubuzwa mayelana neziqeshana zezinwele
5.1 Ingabe iziqeshana zezinwele zilungile?
5.2 Ngingasithenga kuphi isilungisi?
5.3 Ubani ongakwazi ukugunda izinwele?
Ukwethulwa kafushane kweziqeshana zezinwele
Kuyaziwa ukuthi i-hair clipper, eyaziwa nangokuthi i-trimmer, iyinto esetshenziselwa ukugunda izinwele zomuntu, ezingahlanganiswa neziqeshana zezinwele kanye nezikele zokugunda izinwele. Umgomo we-trimmer ufana nesikelo esivamile. Kukhona izinqamuli ezinamandla kakhudlwana ezinenjini ezibuye zisetshenziselwe ukugunda izimvu noma uboya.
Umgomo wokusebenza we-trimmer
Isinqamuli siqukethe ama-blade anjenge-sawtooth agqagqeneyo kanye nomzimba nesibambo. Lapho usebenza, ama-blade amabili azoslayida ngokuvundlile ahlobene namanye. Ukuze i-blade isebenze, ezihambayo zinganikeza amandla e-kinetic ngesandla noma nge-motor kagesi.
Njengoba i-trimmer ihamba, izinwele zizoba phakathi kwamazinyo e-blade, amazinyo aphezulu naphansi azosebenza njengesikelo esincane esishelela ngaphesheya futhi sigunda izinwele.
Sinjani isakhiwo se-trimmer?
Isilungisi sezinwele mhlawumbe abantu abaningi ubathola bebazi kodwa akuwona wonke umuntu owaziyo ngesakhiwo sabo. Eqinisweni, i-trimmer iqukethe izingxenye ezilandelayo:
Ikhava yokuzivikela ye-trimmer.
Ingxenye ye-blade ye-trimmer.
Inkinobho yokulawula amandla ivula futhi ivale isilungisi.
Isistimu ye-LED ikhombisa isimo sebhethri (iziqeshana zezinwele ezisebenza ngebhethri).
Izinhlobo zeziqeshana zezinwele ezidumile emakethe
Ama-Trimmers angumkhiqizo ovamile namuhla, awaveli kuphela ezindaweni zokucwala izinwele, izindawo zokugunda amadoda kodwa nasemindenini enezingane ezincane. Ngakho-ke uyazi, yiziphi izinhlobo ezidumile zokugunda izinwele? Ngokuqondile:
Isilungisi sebhethri esishajwa kabusha (isilungisi esingenantambo)
Lesi isiqeshana sezinwele esidumile namuhla esithandwa imindeni eminingi namasaluni ezinwele. Ziqukethe izinzuzo eziningi ezivelele njenge:
Azikho izintambo ezibambezelekile nokuphepha ngaphandle kokwesaba ukushaqeka kukagesi.
Yenza imisebenzi yokugunda izinwele ibe lula futhi ibe lula kakhulu.
Isisindo se-trimmer silula, ubukhulu buhlangene, buqinile esandleni futhi akubangeli ukukhathala kwesandla.
Umthamo wokusebenza we-booster enamandla webhethri uyasebenza kakhulu futhi uzinzile.
Lapho wenza izinwele, umshini awenzi umsindo omkhulu, unekhono elihle lokulwa nokudlidliza ukuletha induduzo lapho usebenza.
Isilungisi sikagesi (i-trimmer enentambo)
Iziqeshana zezinwele ezinezintambo zikagesi ziyimikhiqizo ethandwa kakhulu futhi sezinesikhathi eside zikhona. Nakuba ukuba nezintambo kukwenza ungakhululeki ngezinye izikhathi, banezinye izinzuzo eziningi ezivelele njengalezi:
Njengomkhiqizo osebenzisa i-220V yamanje, injini isebenza kahle kakhulu futhi inomthamo omkhulu.
Isinqamuli sikagesi sikwenza kube lula ukuphatha zonke izinhlobo zezinwele, kusukela ezimfushane kuye kwezinde, ukusuka kokuwugqinsi, okunzima kuye kwezithambile.
Ukusetshenziswa isikhathi eside ngaphandle kokukhathazeka ngokuphelelwa ibhethri phakathi.
Ingasebenza ngokuqhubekayo ngezinwele amahora ama-2, ngakho-ke ihlale ithandwa ngabagundi abaningi.
Imikhiqizo engu-5 ehamba phambili ethandwa kakhulu yokugunda izinwele namuhla
Emakethe namuhla, kunezinhlobo eziningi ze-trimmer ezinomklamo ohlukile, isakhiwo, umthamo kanye nokusebenziseka. Uma ubheka ukuyithenga Iziqeshana zezinwele ezinhle kakhuluukuqina okuphezulu kungabhekisa kumamodeli athile wokusika angezansi:
Ikhodi yokulungisa iCodol 531
Umkhiqizo wokuqala esifuna ukwethula kuwe kwezingu-5 ezihamba phambili zokugunda izinwele namuhla yi-Codol 531 yaseKorea. Lona umkhiqizo onomklamo omuhle, ohlangene owenza kube lula ukuwubamba. I-blade tip ye-trimmer inobude obungu-0.8 kuya ku-2mm ngejubane eliguquguqukayo elifaneleka kakhulu ukwenza izinwele.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye uze nezesekeli ezifana nebhulashi, uwoyela wokuhlanza kanye namasayizi ama-4 wekamu ukuze kube lula ukulungisa ubude bezinwele obufunayo. Akukhona lokho kuphela, izinto ezisezingeni eliphezulu zomkhiqizo zombili zinhle futhi ziphephe kakhulu. Ibhethri elishajekayo linomthamo omaphakathi, udinga nje ukulishaja kanye, lingasetshenziswa ngokuqhubekayo isikhathi esingaphezu kwehora elingu-1, okuyinto elula kakhulu.
Oda ku-Lazada Order e-Tiki(Okwangempela) Oda eShopee
I-Philips hair trimmer – I-HC5410 iyisilungisi sezintambo esinezintambo futhi esixhunyiwe ngqo uma sisetshenziswa. I-blade yomkhiqizo yenziwe ngensimbi engagqwali engakwazi ukuzilola ukuze idale izinto ezibukhali futhi idale ukuqina ukuze isetshenziswe isikhathi eside. Ikakhulukazi, i-blade ingashintshwa kalula ukusuka ku-0.5 ukuya ku-23mm ngenxa yekama elinamathiselwe ngqo ekhanda lesilungisi. Uma ungayisebenzisi ikamu lokulungisa i-blade, kusengenzeka ukusika ngesilinganiso sobude obungu-0.5mm.
Lolu hlobo lwe-trimmer luklanyelwe ngokufanele ukusika izinwele ezichwepheshile. Kodwa-ke, intengo yalo mkhiqizo iphezulu kakhulu, ishintshashintsha cishe ezigidini eziyi-1.5 ze-VND, ngakho-ke akhethwa kakhulu abantu nemindeni kunokuba akhethwe ezindaweni zokucwala izinwele.
Oda ku-Lazada Order eShopee
Okulandelayo ohlwini lweziqeshana zezinwele ezinhle ezi-5 eziphezulu esifuna ukwethula kini isinqamuli se-Codos T6. Lona omunye wemikhiqizo edume kakhulu ngemigqa yayo yomkhiqizo wekhwalithi yekhwalithi. I-Codos T6 trimmer iyisinqamuli esingenantambo, sisebenzisa ibhethri elishajekayo, kodwa isici esikhethekile ukuthi sisavumela abasebenzisi ukuthi bayixhume ngokuqondile lapho isetshenziswa.
Iphethe i-blade engaguquki eyenziwe ngensimbi engagqwali, i-blade ehambayo yenziwe nge-Ceramic emhlophe enobukhali obuphezulu, eqinile futhi i-blade ihlale igcina ubukhali bayo ngisho nangemva kwesikhathi sokusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, ukulungiswa kobude bezinwele zezinwele nakho kulula ngezinyathelo zokuphakama kusuka ku-1.3mm kuya ku-1.9mm, okulungele kakhulu ukusika izinwele zezingane ezincane.
Bheka: Hlobo luni lwe-hairspray olulungile?
I-Jichen Trimmer JC-0817
I-Jichen JC-0817 trimmer ingenye yezinhlobo ze-trimmer ezikhethwe imindeni eminingi okwamanje. Ngesisindo esincane kodwa uzizwa eqinile esandleni. Okugqamile komkhiqizo ukwakheka kwawo okuthambile futhi okudonsa amehlo ngamathoni emibala evelele.
Inamandla afinyelela ku-3W kanye nezinsimbi ezingenasici ezicijile kakhulu zokugunda izinwele ngokushesha nangempumelelo. Lapho uthenga lo mkhiqizo, uzoba ne-trimmer engu-1, ama-combs angu-03 ukulungisa ubude bobude obuhlukene, intambo yamandla engu-01 ubude obungu-80cm, ibhodlela lamafutha elingu-01 elisetshenziselwa ukuhlola umshini, ibhethri engu-01 AA kanye nebhulashi lokuhlanza.
Oda kuTiki(Okwangempela) Oda eLazada
Ekugcineni, usebenzisa uhlu lwemikhiqizo emi-5 ethandwayo yokugunda izinwele, i-Kemei Km730 yi-Kemei Km730. Ngomklamo omncane, isisindo esilula ukusiza abasebenzisi benze imisebenzi kalula futhi ngokushesha. Izinto ezihlala isikhathi eside zekhwalithi ephezulu azibukhali kuphela kodwa futhi zihlala isikhathi eside, zimelana nokuphoqelelwa futhi ziqinisekisa ukuphepha okuphezulu.
Isikhathi sokusebenzisa isikhathi eside Amandla 2w Usayizi Webhokisi 19 x 11.5 cm Iphakheji ihlanganisa: 1 isilungisi, intambo yokushaja engu-1, uwoyela womshini ongu-1, ibhulashi lokuhlanza elingu-1
I-Kemei 730 Hair Clipper (Ngeshaja) Isikhathi sokusebenzisa esiqinile.
Usayizi webhokisi 19 x 11.5 cm.
Isethi yomkhiqizo ihlanganisa: 1 isilungisi, intambo yokushaja engu-1, uwoyela womshini ongu-1, ibhulashi lokuhlanza elingu-1.
Mhlawumbe uthanda: Iluphi uhlobo lwesomisi sezinwele olungcono kakhulu? ?
Imiyalo yokuthi ungathenga kanjani iziqeshana zezinwele ezingcono kakhulu nezifaneleka kakhulu
Ukuze ukwazi ukukhetha ukuthenga isilungisi sezinwele esihle Futhi udinga ukwazi izici ezifanele ngezansi:
Xem Thêm 8 lý do nên sử dụng ổ cắm điện thông minh | Muasalebang
Khetha ukuthenga ngokuya ngomthamo wesilungisi
Uma ungumlungisi wezinwele noma umgundi wezinwele, ukukhetha isilungisi sezinwele esihle kuzokusiza ukuthi ubhekane nezinhlobo eziningi zezinwele ezihlukene. Kodwa uma uyisebenzisela ukusetshenziswa komuntu siqu ke azibalulekile kangako.
Kodwa-ke, kunoma yikuphi, lapho ukhetha ukuthenga i-clipper yezinwele udinga ukunaka uhlobo lwenjini yomshini nokuthi inamandla angakanani. Imvamisa, isiqeshana sezinwele esinamandla angaba ngu-13W sithathwa njengesanele nje ukuthi sisetshenziswe ezindaweni zokucwala izinwele.
Hlola i-trimmer blade
Enye yemininingwane ephezulu yokuthenga i-trimmer enhle yi-blade yomkhiqizo. Njengamanje, kunezinto eziningi ezisetshenziselwa ukwenza izinsimbi zokusika, ezivame kakhulu izinsimbi zensimbi, ezinokuqukethwe okuphezulu kwekhabhoni, ukuqina nokuqina kanye nomthamo omuhle wokuthwala kanye nokumelana nokugqoka lapho kusetshenziswa.
Ngaphezu kwalokho, kukhona izindwani zokusika ezenziwe nge-Zirconium Oxide (ebuye yaziwe ngokuthi ama-porcelain blades). Lolu hlobo lwe-blade lunobuhle bokuqina okuphezulu, ukuguga okuncane ngenxa yokungqubuzana lapho lusetshenziswa, ukucindezela okuhle kakhulu nokumelana nokugoba. Lo mkhiqizo uvame ukusetshenziswa kubuchwepheshe be-elekthronikhi, i-spaceflight, amabhuleki emoto yokugijima. Ukusetshenziswa kwama-blade okusika izinwele nakho kusetshenziswe kabanzi ngenxa yokuthi akubiki futhi kunokuqina okuphezulu.
Idizayini nayo iyisici esibaluleke kakhulu sokugunda izinwele. Bheka ukuma kwezinkinobho zokulungisa namaswishi okukhanya ukuze ubone ukuthi ahleleke ngendlela efanele futhi alungiswa kalula yini.
Ngaphezu kwalokho, udinga ukubheka ngokucophelela imingcele yobukhulu, ubude, ububanzi nesisindo se-trimmer. Ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo awumkhulu kakhulu noma awumncane esandleni sakho. Uma umklamo ukhulu kakhulu, uncane kakhulu noma unzima kakhulu, uzothinta kakhulu ukusetshenziswa kwezinwele. Ungaya ngqo esitolo ukuze uzame ukuzwa ukuthi kungena yini ngaphambi kokuthi uthenge.
Ukukhetha ngokuya ngenani lesilungisi
Njengamanje emakethe kunezinhlobo eziningi zezinwele zokugunda izinwele ezinamanani ahlukene kusukela engxenyeni ephansi kuya engxenyeni ephezulu. Kodwa-ke, uthola lokho okukhokhelayo, ngakho-ke kufanele ukhethe kuye ngezidingo nezinjongo zakho.
Eminye imibuzo evame ukubuzwa mayelana neziqeshana zezinwele
Iningi lethu, ngaphambi kokuthi sifune ukuthenga noma yimuphi umkhiqizo, sizobuza imibuzo ethile ehlobene nomkhiqizo njengokuthi:
Ingabe iziqeshana zezinwele zilungile?
Ukuthi umkhiqizo muhle noma cha kuncike ezintweni eziningi ezifana nempahla yomkhiqizo, ukuthi usetshenziswa kanjani futhi ulondolozeke kanjani umkhiqizo. Kwesinye isikhathi umkhiqizo kanye nentengo nakho kuyizici ezinquma ukuqina kwesilungisi.
Ngingasithenga kuphi isilungisi?
Njengamanje emakethe kunamakheli amaningi ahlinzeka ngeziqeshana zezinwele ezinhle kakhulu. Ungaya ngqo esitolo sokusabalalisa umkhiqizo noma uthenge kumasayithi athembekile e-e-commerce afana nalawa: Tiki, Shopee, Lazada, Nguyen Kim …
Ubani ongakwazi ukugunda izinwele?
Ama-Trimmers asetshenziswa kakhulu amadoda kanye nezingane, uhlobo ngalunye luzoba nokusetshenziswa okuhlukile kanye nekhono lokugunda izinwele. Ungakhetha umkhiqizo ngamunye ngokwezidingo zakho.
Ukusebenzisa isilungisi sokugunda izinwele konga isikhathi futhi kulula futhi kusiza ekudaleni izinwele zezinwele eziningi ezahlukene. Ngemikhiqizo ephezulu esisanda kuyiphakamisa, i isilungisi sezinwele I-Philips yaziswa kakhulu futhi isetshenziswa abantu abaningi. Uma ubheka ukuthenga eyodwa ongayisebenzisa, zama ukuhlola lo mkhiqizo, uzomangala nakanjani.
Ungakwazi futhi ukubhekisela emigqeni umshini wokugoqa izinwele kuhle iziqondiso Ukuze ube nolwazi oluthe xaxa mayelana nokunakekelwa kwezinwele nokuzinakekela okungcono kakhulu ^^
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-23,835, ukuvakashelwa okungu-18 namuhla)
Cách Làm Bánh Ngói Hạnh Nhân Thơm Ngon Giòn Rụm | Muasalebang